मेसीलाई अर्जेन्टिना फर्काउन फ्यानहरुको प्रदर्शन ! – dudhkoshionline
मेसीलाई अर्जेन्टिना फर्काउन फ्यानहरुको प्रदर्शन !
काठमाडौँ । लियोनेल मेसीले बार्सिलोना छोड्ने खबरले फुटबल जगतलाई तरंगित बनाएको बेलामा मेसीको पूर्वक्लब नेवेल ओल्ड ब्वायज क्लबका फ्यानहरु मेसीलाई ल्याउन प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
मेसी बार्सिलोना आउनु अघिको क्लब नेवेलका फ्यानहरुले मेसीलाई ल्याउन माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
मेसीले बार्सिलोना छोड्न अनुरोध गरेपछि अहिले मेसी कुन क्लबमा जाने भन्ने अन्योल रहेको छ । मेसीलाई भित्र्याउन म्यानचेस्टर सिटी, म्यानचेस्टर युनाइटेड, पिएसजी, इन्टर मिलानजस्ता क्लबले प्रयास गरिरहेका छन् ।
यी क्लबहरुमा सिटीले सय मिलियन र तीन खेलाडी दिने अफर गरेको बताइएको छ । यस बारेमा बार्सिलोनाको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।
मेसीले बार्सिलोना छोड्ने बताएपछि अब उनको घरेलु क्लबका फ्यानहरुले मेसीलाई घरेलु क्लबमा ल्याउनु पर्ने भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मेसीले १३ बर्षको उमेरमा बार्सिलोना आउनु अघि सोहि क्लबमा खेलेका थिए । बार्सिलोनाको एकेडेमी ला मासियाका खेलाडी मेसीलाई अहिले नेवेल ओल्ड ब्वायजका फ्यानहरुले मेसी यस क्लबमा आउने उपयुक्त समय भएको बताउदै प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।
नेवेलका फ्यानले डीएगो म्यारोडोना पनि ३३ बर्षको उमेरमा सेभियामा खेलिरहेका बेला अर्जेन्टिना फर्केर नेवेलबाट खेलेको बताउदै मेसी फर्किन सम्भव रहेको दाबि गरिरहेका छन् । त्यति बेला पनि म्यारोडोना फर्किने कुरा कसैले विश्वास नगरेका भए पनि उनी फर्किएको बताइएको छ ।
सोलुखुम्बुमा माटो परिक्षण गर्ने कृषकको संख्यामा वृद्धि हुँदै